Maalin maalmaha ka mid ah qeybtii hore ee 2020, waxaan si lama filaan ah iimayl uga soo qaadnay macmiil na weydiisanaya inaan mar kale soo xiganno sariirta hoose oo aan u sheegno macaamilka inta sariirta lagu ridi karo weel 20-ft ah. Waad ku mahadsan tahay waayo -aragnimadeenii hore, waxaan si dhakhso leh u xisaabinnay latesyada ...
Bishii Maajo 2017, Golaha Hebei ee Horumarinta Ganacsiga Caalamiga ah ayaa abaabulay bandhig qalab dhisme, kaas oo ka dhacay magaalada macmiilku ku yaal. Waan is -qornay waxaanan ka faa'iideysan karnaa fursaddan si aan u booqanno macaamilka. Waxaan gaarnay meel ...
Sariirta caagga ah ee biibiilaha la taaban karo ee si fiican loo xoojiyay
Qeybtii labaad ee 2015, macmiil ka tirsan shirkadeena oo ku takhasusay soo saarista dhuumaha dheecaannada shubka ah ayaa noo soo diray sawirro. Badeecadda sawirku waxay ahayd dhejisyo. Xirmooyinkan waxaa laga samayn karaa bir bir ah ama bir bir ah. Si kastaba ha ahaatee, shubay birta waa u fududahay b ...